Fanohanana | Wuhan Golden Laser Co., Ltd.
Laser Golden SERVICE POLITIKA
-Penitra ny Service "212"
2: valiny ao amin'ny 2 ora
1: manome vahaolana ao amin'ny 1 andro.
2: hamaha fitarainana tamin'ny 2 andro
"1 + 6" Complete Services famaritana
Any ny milina novidiny tamin'ny laser avy Golden Laser fametrahana na mila fikojakojana, dia hanome "1 + 6" feno tolotra.
Fametrahana iray Service "indray mandeha OK"
Serivisy feno enina
1. milina sy ny faritra maso
Hazavao ny asan'ny faritra sy ny milina milina azo antoka maharitra ny fandidiana.
Hazavao ny fampiasana milina sy ny rindrambaiko. Hitarika ny fampiasana araka ny tokony mpanjifa, manolotra vokatra fiainana sy hampihenana ny fanjifàna angovo.
3. Machine fihazonana
Hazavao ny fikojakojana ny milina faritra mba hanitatra ny fiainana sy ny vokatra afa-tsy ny angovo
4. Product Process mpitari-dalana
Miankina amin'ny fitaovana isan-karazany, no naka fanahy mba hahazoana tandrify fanodinana masontsivana mba hahazoana antoka tsara indrindra hatsaran'ny vokatra.
5. Site madio-up asa
Diovy ny mpanjifa toerana rehefa vita ny fanompoana.
6. Customer fanombanana
Mpanjifa manome ny fanehoan-kevitra manan-danja momba ny asa fanompoana sy ny ampy sy ny fametrahana manokana.
Dia nifindra ny tsipiriany. Tsy vitan'ny no hanenjika ny tsara indrindra ny vokatra, fa koa ilaintsika ny mitandrina ho amin'ny fanompoana, ka diniho ny vokatra toy ny fiainana, izay dia hihazakazaka amin'ny alalan'ny mialoha ny fivarotana, ny fivarotana sy Ankehitriny-varotra fanompoana mandritra ny fiainana ny vokatra, ary miezaka Andaminana vidiny ho an'ny mpanjifa-koa.
Laser Golden manana ny matanjaka be ara-teknika sy ny ekipa tsara rehefa avy-fanompoana varotra.
1. Ny tsirairay rehefa avy-varotra fanompoana manokana ny volamena tamin'ny laser manana diplaoma oniversite, na ambony, ary samy rehefa avy-fanompoana manokana varotra efa nasiam-maharitra anatiny nandalo fiofanana sy fanombanana ny teknolojia rafitra talohan'ny fanamarinana ara-panjakana ny asa.
2. ny tombontsoan'ny mpanjifa foana no voalohany, ary io no azo hozongozonina andraikitry ny fiahiana sy ny manaja mpanjifa rehetra. Izahay manome antoka fa avy amin'ny fanekena ny fitarainana ny teo-toerana fanompoana, fangatahana rehetra avy amin'ny mpanjifa dia ho tanteraka ny volamena tamin'ny laser aloa.
3. Ny foibe fanompoana tamin'ny laser volamena dia indraindray aorian'ny-varotra fanompoana manokana ho an'ny fampiofanana ara-teknika, ara-teknika vaovao farany fahalalana sy hanatsarana ny fahaiza-manao asa fanompoana.
Mba hiantohana ny fanatsarana hatrany ny serivisy ho an'ny mpanjifa, dia nanangana rafitra fifaninanana sy rafitra fitehirizana talenta koa izahay mba hahavelomana ny olona mahay sy manan-talenta indrindra, hahafahan'ny mpampiasa mahazo serivisy mahafa-po maharitra.